ငယ်ဘဝကိုပြန်လွမ်းမိစေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရှေးအကျဆုံး ခေတ်ဦးဘာဂါဆိုင်လေး
23 Jul 2018 . 6:24 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်နည်းပညာတွေမဖွံ့ဖြိုးသေးခင်ကာလ၊ အရာရာသတင်းပြန့်နှံ့မှုနည်းပါးခဲ့တဲ့ ကာလတွေတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ ၆မိုင်ခွဲ IBC ရှေ့နားမှာ လှည်းလေးနဲ့ အန်တီကြီးတစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ရောင်းခဲ့တဲ့ဘာဂါဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်က ဘာဂါချစ်သူတွေရဲ့ ရတနာသိုက်လေးတစ်ခုပါ။
ကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့ ပေါင်မုန့်သား၊ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ Ketchup၊ Import လုပ်ထားတဲ့အမဲသားကိုမှ ကိုယ်တိုင် သေချာအရသာရှိအောင် Grill လုပ်ပေးတဲ့ Maggi ဟမ်ဘာဂါဆိုတာ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်တွေမှိုလိုပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အရသာအရှိဆုံး ဘာဂါဆိုင်လေးဟာ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလို နှစ်ကာလများစွာကြာသောအခါ ဆိုတဲ့အတိုင်း လှည်းလေးအဆင့်ကနေ အထာကျကျဘာဂါဆိုင်လေးအဖြစ်ကို အသွင်ပြောင်းပြီး ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
သင်္ချာဂဏန်း (Pi) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ 3.14 ဆိုပြီး အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်းအနားယူလို့ရမယ့် ဆိုင်လှလှလေးအဖြစ် ပြန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
မြေညီထပ်ဆိုင်ခန်းကျဉ်းလေးကို သင်္ချာဂဏန်းလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ကွက်လပ်လေးဟာလည်း နေသာတဲ့ညနေခင်းတွေအတွက် Chilling လုပ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါပဲ။ ရိုးရှင်းပြီး ဘာနဲ့မှ မျက်စိအမြင်ကို မရှုပ်စေတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
အဓိက ရောင်းတာကတော့ ဘာဂါတွေ၊ European မနက်စာတွေ၊ Sandwich တွေ၊ Pie တွေနဲ့ Muffins တွေ အများဆုံးရပါတယ်။
အကောင်းဆုံးလား? ညွှန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟိုးအရင်လက်ရာကို ခုထိထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုချီးကျူးရမယ့် ဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီး Maggi Burger ပါပဲ။ အမဲသားအပြားခပ်ကြီးကြီးကို ပုံမှန်ဘာဂါတွေမှာပါလေ့ရှိတဲ့ ကြက်သွန်ကွင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ Ketchup တို့နဲ့ ပုံမှန် ဖန်တီးတာပေမယ့် လျှာပေါ်ထိ မွှေးဆိမ့်နေအောင်ကောင်းတဲ့ ပေါင်မုန့်အသားနဲ့ တကိုက်စားပြီးရင်းတစ်ကိုက်ထပ်ကိုက်ချင်မိအောင် မွှေးလွန်းတဲ့ Homemade Ketchup ပါ။ Cheese မပါပါဘူး။ ကြက်ဥမပါပါဘူး။ တစ်လုံးကို ၃၅၀၀ ပါ။ ဒါပေမယ့် ထပ်ထပ်စားချင်လောက်အောင်ကို အမဲသား၊ ပေါင်မုန့်…..အကုန်ပေါင်းထားတဲ့ ဘာဂါတစ်လုံးလုံး ရှယ်ကောင်းလွန်းလို့ အမှတ်ပြည့်ပေးချင်မိတဲ့အရသာပါပဲ။ ကြက်ဥ၊ Cheese ထည့်ချင်ရင်လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကတော့ ရွေးချယ်စရာ နားမလည်တဲ့ မီနူးတွေ အများကြီးထဲကမှ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ Coco Mango Smoothie ပါ။ အုန်းသီးရည်ကို သရက်သီးစိန်တလုံးမွှေးမွှေးလေးနဲ့ Smoothie ပုံစံ ချဉ်ချဉ်လေးဖျော်ထားတာ သဘာဝအရသာ လန်းဆန်းနေအောင်ခံစားရပါတယ်။ ၃၀၀၀ပါပဲ။
အဲ့ဒီလောက်နဲ့တင် ကိုယ့်တစ်နပ်စာက ဗိုက်ပြည့်တင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆို မနည်းလွန်း မများလွန်းတဲ့ အနေအထားပါ။
ဒါပေမယ့် အာမခံနိုင်တာက အရသာ၊ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ နွေးထွေးတဲ့စေတနာပါ။ နိုင်ငံခြားဆန်ဆန် မီနူးကအစ သေချာပြင်ထားသလို သန့်ရှင်းမှုကိုလည်း သေချာဦးစားပေးထားပါတယ်။
ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လာစားချင်တဲ့အရသာပါ။ ဒီလို အရသာကောင်းကောင်းနဲ့ ဘာဂါကောင်းကောင်းလေးကို စားရင်း၊ ကော်ဖီဆိုင်လေးရဲ့ ပြတင်းပေါက်မှာထိုင်ရင်း မိုးစက်တွေကို ငေးဖို့အတွက်တော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ စွန့်ဦးပထမဘာဂါဆိုင်လှလှလေးက တစ်ခါလောက်လာခဲ့ဖို့ စောင့်မျှော်နေမှာပါ။
လိပ်စာကတော့ အမှတ် ၄၊ လှိုင်သီရိအိမ်ယာ၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှာပါ။ ထောင့်စွန်းလေးမှာမို့ လမ်းမပေါ်မှာမှ သေချာရှာရပါတယ်။ ဖွင့်ချိန်မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီထိပါ။
ငယျဘဝကိုပွနျလှမျးမိစမေယျ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ရှေးအကဆြုံး ခတျေဦးဘာဂါဆိုငျလေး
လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈဝနျးကငျြနညျးပညာတှမေဖှံ့ဖွိုးသေးခငျကာလ၊ အရာရာသတငျးပွနျ့နှံ့မှုနညျးပါးခဲ့တဲ့ ကာလတှတေုနျးက ရနျကုနျမွို့ ၆မိုငျခှဲ IBC ရှနေ့ားမှာ လှညျးလေးနဲ့ အနျတီကွီးတဈယောကျ ကိုယျတိုငျလုပျရောငျးခဲ့တဲ့ဘာဂါဆိုငျလေးတဈဆိုငျက ဘာဂါခဈြသူတှရေဲ့ ရတနာသိုကျလေးတဈခုပါ။
ကိုယျတိုငျ လုပျတဲ့ ပေါငျမုနျ့သား၊ ကိုယျတိုငျဖနျတီးတဲ့ Ketchup၊ Import လုပျထားတဲ့အမဲသားကိုမှ ကိုယျတိုငျ သခြောအရသာရှိအောငျ Grill လုပျပေးတဲ့ Maggi ဟမျဘာဂါဆိုတာ သူ့ခတျေသူ့အခါက ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အကောငျးဆုံးစာရငျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ စားသောကျဆိုငျတှမှေိုလိုပေါကျလာတဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျတျောတျောကွာကွာ ပြောကျဆုံးနခေဲ့တဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အရသာအရှိဆုံး ဘာဂါဆိုငျလေးဟာ မွနျမာရုပျရှငျကားတှထေဲကလို နှဈကာလမြားစှာကွာသောအခါ ဆိုတဲ့အတိုငျး လှညျးလေးအဆငျ့ကနေ အထာကကြဘြာဂါဆိုငျလေးအဖွဈကို အသှငျပွောငျးပွီး ပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
သင်ျခြာဂဏနျး (Pi) ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျနဲ့ 3.14 ဆိုပွီး အငျးစိနျလမျးမပျေါမှာ ကျောဖီသောကျရငျးအနားယူလို့ရမယျ့ ဆိုငျလှလှလေးအဖွဈ ပွနျပျေါထှကျလာခဲ့ပါပွီ။
မွညေီထပျဆိုငျခနျးကဉျြးလေးကို သင်ျခြာဂဏနျးလေးတှနေဲ့ အလှဆငျထားပါတယျ။ ဆိုငျရှကှေ့ကျလပျလေးဟာလညျး နသောတဲ့ညနခေငျးတှအေတှကျ Chilling လုပျကောငျးတဲ့နရောလေးပါပဲ။ ရိုးရှငျးပွီး ဘာနဲ့မှ မကျြစိအမွငျကို မရှုပျစတေဲ့ဆိုငျလေးပါ။
အဓိက ရောငျးတာကတော့ ဘာဂါတှေ၊ European မနကျစာတှေ၊ Sandwich တှေ၊ Pie တှနေဲ့ Muffins တှေ အမြားဆုံးရပါတယျ။
အကောငျးဆုံးလား? ညှနျးရမယျဆိုရငျတော့ ဟိုးအရငျလကျရာကို ခုထိထိနျးထားနိုငျတယျလို့ ပွောစမှတျပွုခြီးကြူးရမယျ့ ဆိုငျရဲ့ နာမညျကွီး Maggi Burger ပါပဲ။ အမဲသားအပွားခပျကွီးကွီးကို ပုံမှနျဘာဂါတှမှောပါလရှေိ့တဲ့ ကွကျသှနျကှငျး၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ Ketchup တို့နဲ့ ပုံမှနျ ဖနျတီးတာပမေယျ့ လြှာပျေါထိ မှေးဆိမျ့နအေောငျကောငျးတဲ့ ပေါငျမုနျ့အသားနဲ့ တကိုကျစားပွီးရငျးတဈကိုကျထပျကိုကျခငျြမိအောငျ မှေးလှနျးတဲ့ Homemade Ketchup ပါ။ Cheese မပါပါဘူး။ ကွကျဥမပါပါဘူး။ တဈလုံးကို ၃၅၀၀ ပါ။ ဒါပမေယျ့ ထပျထပျစားခငျြလောကျအောငျကို အမဲသား၊ ပေါငျမုနျ့…..အကုနျပေါငျးထားတဲ့ ဘာဂါတဈလုံးလုံး ရှယျကောငျးလှနျးလို့ အမှတျပွညျ့ပေးခငျြမိတဲ့အရသာပါပဲ။ ကွကျဥ၊ Cheese ထညျ့ခငျြရငျလညျး ပွောလို့ရပါတယျ။
ဒုတိယအကွိုကျဆုံးကတော့ ရှေးခယျြစရာ နားမလညျတဲ့ မီနူးတှေ အမြားကွီးထဲကမှ မှနျမှနျကနျကနျရှေးခယျြခဲ့မိတဲ့ Coco Mango Smoothie ပါ။ အုနျးသီးရညျကို သရကျသီးစိနျတလုံးမှေးမှေးလေးနဲ့ Smoothie ပုံစံ ခဉျြခဉျြလေးဖြျောထားတာ သဘာဝအရသာ လနျးဆနျးနအေောငျခံစားရပါတယျ။ ၃၀၀၀ပါပဲ။
အဲ့ဒီလောကျနဲ့တငျ ကိုယျ့တဈနပျစာက ဗိုကျပွညျ့တငျးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ဆို မနညျးလှနျး မမြားလှနျးတဲ့ အနအေထားပါ။
ဒါပမေယျ့ အာမခံနိုငျတာက အရသာ၊ သနျ့ရှငျးမှုနဲ့ နှေးထှေးတဲ့စတေနာပါ။ နိုငျငံခွားဆနျဆနျ မီနူးကအစ သခြောပွငျထားသလို သနျ့ရှငျးမှုကိုလညျး သခြောဦးစားပေးထားပါတယျ။
ထပျခါထပျခါပွနျလာစားခငျြတဲ့အရသာပါ။ ဒီလို အရသာကောငျးကောငျးနဲ့ ဘာဂါကောငျးကောငျးလေးကို စားရငျး၊ ကျောဖီဆိုငျလေးရဲ့ ပွတငျးပေါကျမှာထိုငျရငျး မိုးစကျတှကေို ငေးဖို့အတှကျတော့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ စှနျ့ဦးပထမဘာဂါဆိုငျလှလှလေးက တဈခါလောကျလာခဲ့ဖို့ စောငျ့မြှျောနမှောပါ။
လိပျစာကတော့ အမှတျ ၄၊ လှိုငျသီရိအိမျယာ၊ အငျးစိနျလမျးမပျေါမှာပါ။ ထောငျ့စှနျးလေးမှာမို့ လမျးမပျေါမှာမှ သခြောရှာရပါတယျ။ ဖှငျ့ခြိနျမနကျ ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီထိပါ။